သံမဏိတံခါး Frame ကမြန်တံခါး China Manufacturers & Suppliers & Factory
သံမဏိတံခါး Frame ကမြန်တံခါး - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 10 များအတွက်စုစုပေါင်း သံမဏိတံခါး Frame ကမြန်တံခါး ထုတ်ကုန်များ)
စက်ရုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များမြန် Rolling တံခါး
စက်ရုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များမြန် Rolling တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent curtain: 1.2...
တာဘိုင်လူမီနီယမ်အစာရှောင်ခြင်း Roller Shurtter တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် သတ္တုအမြန် roller ရှပ်တာကိုနေရာတော်တော်များများ၌ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြန်တံခါးများမှအကျိုးရသော်လည်း၎င်း၏တည်ရှိမှုကိုသတိမထားမိဘဲ၊ လျှောက်လွှာများ: လေတိုက်နှုန်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အပြင်၊ အပူချိန်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဆေးဝါး၊...
လူမီနီယမ်အလွိုင်း Frame ကအလိုအလျောက်အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး
လူမီနီယမ်အလွိုင်း Frame ကအလိုအလျောက်အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး အဆိုပါရိုးရှင်းသောခက်အစာရှောင်ခြင်းတံခါးကိုတဦးတည်းအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, စွမ်းအင်ချွေတာရေး, တံဆိပ်ခတ်ခြင်း, မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, လေတိုက်ခုခံ, ကြာရှည်ခံမှု, anti-theft သတ်မှတ်။ မြန်နှုန်းမြင့် partition...
သံမဏိ Frame ကအတူ PVC ဂိုဒေါင်တံခါး
PVC ဂိုဒေါင်တံခါး PVC ဂိုဒေါင်တံခါး PVC ဂိုဒေါင်တံခါးကိုသန့်ရှင်းတဲ့အခန်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အခန်းသို့အရငျမွမှေုနျ့ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ frame ကိုသံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့နှင့်တံခါးများဖွင့်လှစ်ရန်ခြောက်လနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ အောက်ကမြန်နှုန်းမြင့် PVC ဂိုဒေါင်တံခါးများနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်ဖြစ်ကြသည်။ 1....
304 # သံမဏိ Rapid တံခါး Frame
304 # သံမဏိ Rapid တံခါး Frame ကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်: နည်းပညာအမျိုးအစား: နည်းပညာဆိုင်ရာ Paramerers Useage: Wide အစားအစာဓာတုဗေဒအထည်အလိပ်အီလက်ထရွန်းနစ် supemarket အအေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, သိုလှောင်နှင့်အခြားသောနေရာများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Size: အများဆုံးအရွယ်အစား: W6000 * H6000mm...
သံမဏိအမြင့်မြန်နှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်တံခါးအသေးစိတ်နည်းပညာဆိုင်ရာ Paramerers Frame Useage: Wide အစားအစာဓာတုဗေဒအထည်အလိပ်အီလက်ထရွန်းနစ် supemarket အအေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, သိုလှောင်နှင့်အခြားသောနေရာများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Size: အများဆုံးအရွယ်အစား: W6000 * H6000mm...
တစ်ဦးက counterbalance system ကိုအကျိုးရှိစွာနှင့်အင်အားစိုက်ထုတ်စစ်ဆင်ရေးကိုသေချာစေရန်ပုဒ်မ overhead တံခါးကိုသို့ထည့်သွင်းထားသည်။ အဆိုပါ counterbalance စမ်း၏ပါဝင်သည်မြင့်မားတဲ့ဆန့ helical ဒဏ်ရာသံမဏိဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးသံမဏိရိုးတံအပေါ်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဒါဟာတစ်ဝှမ်း 50000...
သံမဏိတံခါး Frame ကမြန်တံခါး သံမဏိ Rapid အမြန်တံခါး သတ္တုခက်မြန်တံခါး မြန်မြန်အမြန်တံခါး အထည်ကုလားကာအမြန်တံခါး လျှပ်စစ် PVC အမြန်တံခါး PVC သတ္တုတွင်းအမြန်တံခါး PVC မြန်မြန်မြန်တံခါး